Amin'ny ankapobeny, mividy mpanadio vovo ao an-trano izahay hikotrana fako, fa raha ny tena izy, zavatra maro no tsy azo forohana, ary mety tsy dia fantatrao tsara. Ka anio isika dia hiresaka momba izay tsy azo entin'ny mpanadio banga. Aza adino ny mijery akaiky kokoa ary aza manao zavatra manimba an'ireo mpanadio banga.
Ny ankamaroan'ny mpanadio banga ampiasaintsika ankehitriny dia mpanadio banga tarihin-tànana. Fantatsika rehetra fa ny mpanadio vovo-tànana tànana dia tsy afaka mandray rano, ao anatin'izany ny fako ao an-dakozia sy ny fako mando. Tsy afaka mifoka fako maina fotsiny izy ireo. Na izany aza, ny mpanadio vovo-siny dia afaka mandray rano, izay tena mety amin'ny faritra lehibe na fako be ao an-trano.
Ny faharoa dia ny fanadiovan'ny banga tantanan'ny tànana tsy afaka mandray zavatra metaly. Ny iray dia ny manala ny kapoaky ny vovoka, ary ny iray kosa dia hihodina eo amin'ny haavon'ny kaopy vovoka, izay mety hisy fiatraikany amin'ny fahasimban'ny efijery sivana ary mahatonga ny mpanadio vovo ao an-trano tsy hiasa ara-dalàna.
Ny fahatelo dia ireo singa lehibe. Tery sy kely ny fantsontsika. Ireo zavatra poti lehibe dia hanakana ireo fantsona. Ny faharoa dia ny tsy ahafahan'izy ireo mihodina amin'ny hafainganam-pandeha avoakany rehefa entina izy ireo. Na izany aza, ny mpanadio banga dia afaka mitroka voanjo sy hoditry ny voan-dranomasina, izay zavatra matanjaka be ao amin'ireo mpanadio vavahady ao an-trano.
Ireo mpanadio vacuum dia tsy afaka minono na inona na inona. Azonao ve? Androany, natao indrindra ho an'ny mpanadio banga amin'ny tanana. Raha fomba fanadiovan-drivotra hafa io, dia mety ho hafa izy io, koa tadidio mba jereo ny antsipiriany rehefa mividy azy ianao.